+95-9-786 251 505, 264 200 107, 265 716 656
SHOP WITH FAST & CONVENIENCE
Search for -Select-BooksClothing, Shoes & Jewelry
royalshop.biz သည် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးလိုသူများအတွက် အချိန်ကုန်လူပန်းခံ၍ သွားလာနေရခြင်းနှင့် လုပ်အား ဆုံးရှုံးမှုများ မလိုအပ်ဘဲ online မှနေ၍ ပစ္စည်းမှာယူနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ လွှင့်တင်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
royalshop.biz သည် ရန်ကုန်မြို့ရှိ Royal Shop မှ လွှင့်တင်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ website နှင့် ပတ်သက်သည့် ပိုင်ဆိုင်မှု၊ website တွင် ပြုလုပ်သော အော်ဒါများနှင့် ပတ်သက်၍ တာဝန်ရှိမှုတို့သည် Royal Shop နှင့်သာ သက်ဆိုင်ပါသည်။
royalshop.biz နှင့် online အော်ဒါ ပြုလုပ်သူများကြားတွင် နားလည်မှု မှားယွင်း၍ ဖြစ်စေ၊ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူပြီး စည်းကမ်းကို တစ်ဦးဦးကဖောက်ဖျက်၍ဖြစ်ေ၊ နစ်နာဆုံးရှုံမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါက အငြင်းပွားမှုများ မဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် ဤစာမျက်နှာပါ အကြောင်းအရာများကို အစအဆုံး အသေးစိတ် ဖတ်ရှုထားစေလိုပါသည်။
royalshop.biz သည် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူ၏ အချက်အလက်များကို cookies အသုံးပြု၍ သိမ်းဆည်းထားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဤ website ပါ အချက်အလက်များကို အခြားတစ်နေရာရာတွင် အသုံးပြုမည် ဖော်ပြမည်ဆိုပါက royalshop.biz မှ ရယူထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်းမဖြစ်မနေ ဖော်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော် ထိုသို့ အချက်အလက်များ ကူးယူဖော်ပြခြင်းအတွက် ဆုံးရှုံးမှု တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ပေါ်လာပါကroyalshop.biz တွင် တာဝန်မရှိပါ။
royalshop.biz တွင် အခြား website တို့၏ Link တို့ကို ဖော်ပြကောင်း ဖော်ပြထားမည် ဖြစ်သော်လည်း ၄င်း website တို့သည် royalshop.biz နှင့် သက်ဆိုင်မှုမရှိသလို ၄င်းတို့ကြောင့် ဆုံးရှုံးမှု တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ပေါ်လာပါကလည်း royalshop.biz နှင့် သက်ဆိုင်မှု မရှိပါ။
ရောင်းချနေသော ပစ္စည်းများနှင့် စျေးနှုန်း
royalshop.biz တွင် ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များသည် မြန်မာပြည်ရှိ စာအုပ်ထုတ်ဝေသူ ပုံနှိပ်တိုက်များမှ တိုက်ရိုက် ခွင့်ပြုချက် ရယူထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ပြင်ပစာအုပ်ဆိုင်များတွင် ရောင်းချနေသော စျေးနှုန်းအတိုင်း ရောင်းချပေးနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဤ Website တွင် ရောင်းချနေသည့် ပစ္စည်းများ၏ စျေးနှုန်းသည် စျေးကွက်တွင် ရောင်းချနေသည့် စျေးနှုန်းထက် မများစေရန် အာမခံချက်ပေးပါသည်။ အကယ်၍ စျေးကွက်တွင် ရောင်းချနေသည့် စျေးနှုန်းသည် များနေခဲ့ပါက ဤ Website တွင် ရောင်းချနေသည့် ပစ္စည်းများ၏ စျေးနှုန်းကို ကြိုတင်အကြောင်းကြားမှုမရှိဘဲ ပြောင်းလဲနိုင်ခွင့် royalshop.biz တွင်ရှိပါမည်။ စျေးနှုန်းပြောင်းမည့် ပစ္စည်းသည် ဝယ်သူလတ်တလော မှာယူထားသည့် ပစ္စည်း ဖြစ်ခဲ့ပါက royalshop.biz သည် ဝယ်သူထံသို့ အော်ဒါ အတည်မပြုခင် အကြောင်းကြားပေးပါမည်။
ငွေပေးချေမှုပုံစံမှာ အဓိကအားဖြင့် (၂) မျိုးရှိပါသည်။
ငွေပေးချေမှုပုံစံ (၁) ။ “မှာယူသူ၏ ရန်ကုန်လိပ်စာသို့ ပစ္စည်းလာပို့ချိန်၌ ငွေချေခြင်း”။
၄င်းသည် မှာယူသော ပစ္စည်းများ မှာယူသူ၏ လိပ်စာသို့ ရောက်ရှိချိန်၌ ငွေပေးချေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိတ်ကို ဤစာမျက်နှာ၏ “မှာယူသူ၏ ရန်ကုန်လိပ်စာသို့ မှာယူပစ္စည်းကို အရောက်ပေးပို့ပေးခြင်း”အပိုင်း၌ အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါသည်။
ငွေပေးချေမှုပုံစံ (၂) ။ “ဘဏ်မှတဆင့် ကျသင့်ငွေလွှဲခြင်း”။
၄င်းသည် မှာယူသော ပစ္စည်းများအတွက် ကျသင့်ငွေကို ဘဏ်မှတဆင့် ငွေလွှဲခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ လွှဲပေးရမည့် ဘဏ်အကောင့် နံပါတ်အပါအဝင် ငွေလွှဲအချက်အလက်များကို ငွေတောင်းခံစာ email တွင် ဖော်ပြပေးထားမည် ဖြစ်ပါသည်။
အော်ဒါမှာယူသူအနေဖြင့် ပစ္စည်းမှန် စျေးမှန်ရှိနိုင်စေရန်အတွက် royalshop.biz မှ အတတ်နိုင်ဆုံး ဝန်ဆောင်မှု ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အော်ဒါပါ ပစ္စည်းများ၏ website တွင် ပြထားသော စျေးနှုန်းနှင့် ဆိုင်တွင် ရောင်းချသောစျေးနှုန်းသည် အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် မတူညီခဲ့ပါက ၄င်းအော်ဒါကို ပယ်ဖျက်ခွင့် (သို့မဟုတ်) ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် ငြင်းဆိုခွင့် (သို့မဟုတ်) မှာယူသူထံအကြောင်းကြားပြီး အော်ဒါပါ item များ၏ စျေးနှုန်းအား ပြင်ဆင်ခွင့် royalshop.biz တွင်ရှိပါမည်။ စျေးနှုန်းပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်မည်ဆိုပါက မှာယူသူထံသို့ ကြိုတင်အကြောင်းကြားပေးပါမည်။
Checkout မပြုလုပ်မှီ သင်ဝယ်ယူထားသောပစ္စည်း၏တန်ဖိုးမှာ အနည်းဆုံး 1,500 ကျပ်ရှိနေရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Checkout ပြုလုပ်စဉ်အချိန်၌ မှာယူသူသည် မှာယူသူ၏ လိပ်စာ (သို့မဟုတ်) ပို့ပေးရမည့် လိပ်စာကို အပြည့်အစုံ ထည့်သွင်းပေးရပါမည်။ ထို့အတူ မှာယူသူထံ ဆက်သွယ်၍ ရနိုင်သည့် ဖုန်းနံပါတ်(များ)ကိုလည်း မဖြစ်မနေ ထည့်သွင်းပေးရပါမည်။ ထည့်သွင်းထားသည့် လိပ်စာသည် မပြည့်စုံ (သို့မဟုတ်) မတိကျ (သို့မဟုတ်) မမှန်ကန်ခဲ့က ဖြစ်စေ၊ မည်သို့မျှ ဆက်သွယ်၍ မရနိုင်သည့် ဖုန်းနံပါတ်ကို ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ပါက ၄င်းအော်ဒါကို ပယ်ဖျက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
အော်ဒါပြုလုပ်ပြီးချိန်တွင် royalshop.biz သည် မှာယူသူထံသို့ ဖုန်းနှင့် ဆက်သွယ်ကာ အော်ဒါနှင့် ပတ်သက်၍ အတည်ပြုချက် ရယူမည်ဖြစ်သည်။ အတည်ပြုချက် ရယူပြီးမှသာ အော်ဒါနှင့် ပတ်သက်သည့် ကိစ္စအဝဝကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
မှာယူသော ပစ္စည်းများ အရေအတွက် အတိုး၊ အလျှော့၊ အပြောင်းအလဲ ပြင်ဆင်ခြင်းများ ပြုလုပ်လိုပါက မှာယူသူသည် အော်ဒါအတည်ပြုချက် မရယူခင်ကတည်းက ပြုလုပ်ရပါမည်။
အော်ဒါအတည်ပြုချက် ရယူပြီးနောက် မှာယူသည့် အော်ဒါပစ္စည်းများကို စုဆောင်းခြင်းနှင့် သီးသန့်ဖယ်ပေးထားခြင်းတို့ကို မှာယူသူအတွက် ရည်ရွယ်ကာ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ သီးသန့်လုပ်ဆောင်ပေးရခြင်း ဖြစ်သဖြင့် အော်ဒါအတည်ပြုချက် ရယူပြီးနောက် မှာယူသူသည် မှာယူသောပစ္စည်းများ အရေအတွက် တိုးခြင်း၊ ပစ္စည်းအမျိုးအစား တိုးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သော်လည်း အရေအတွက် လျှော့ခြင်း၊ ပစ္စည်းအမျိုးအစား လျှော့ခြင်းတို့ကိုမူ လုပ်ဆောင်ခွင့် မရှိတော့ပါ။
အော်ဒါပစ္စည်းများ၏ တစ်ခုချင်းတန်ဖိုးကို အော်ဒါအတည်ပြုပြီးနောက် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေ royalshop.biz သည် ပြောင်းလဲခြင်း မပြလုပ်ပါ။ အတည်ပြုပြီး အော်ဒါပါ ပစ္စည်းများကို မှာယူသူ၏ လိပ်စာသို့ လာပို့သည့်အချိန်တွင် အော်ဒါပါ ပစ္စည်းများ ပျက်စီးချို့ယွင်းမှုများ ရှိခဲ့ပါက ၄င်းပစ္စည်းကို လဲခိုင်းခြင်း (သို့မဟုတ်) လက်ခံရန် ငြင်းပယ်ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ပစ္စည်းလက်ခံရရှိပြီး ငွေပေးချေပြီးနောက် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ပစ္စည်းပျက်စီးခြင်းကို royalshop.biz သည် လက်ခံစဉ်းစားပေးလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
အထက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် “အော်ဒါပါ ပစ္စည်းများ ပျက်စီးချို့ယွင်းမှု” ဆိုသည်မှာ ပစ္စည်း၏ အရည်အသွေး (Quality) ကို မဆိုလိုပါ။ ပစ္စည်း၏ မူရင်း ထုတ်လုပ်စဉ်က အရည်အသွေး (Quality) ကောင်းခြင်း၊ ဆိုးခြင်းသည် မူရင်းထုတ်လုပ်သူနှင့်သာ သက်ဆိုင်ပါမည်။ royalshop.biz တွင် ဖော်ပြထားသည့် “အော်ဒါပါ ပစ္စည်းများ ပျက်စီးချို့ယွင်းမှု” ဆိုသည်မှာ ပစ္စည်း၏ မူရင်း ထုတ်လုပ်ပြီးနောက် ပစ္စည်းကို တစ်နေရာမှ တစ်နေရာ ရွေ့ပြောင်းရာတွင်ဖြစ်စေ၊ အရောင်းဆိုင်တွင် ရောင်းချရန် ပြသထားစဉ်ဖြစ်စေ၊ တစ်နည်းနည်းကြောင့် ပျက်စီးချို့ယွင်းခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ထုတ်လုပ်သူနှင့်မဆိုင်ဘဲ ရောင်းချသူကြောင့် ဖြစ်ရသည့် ပျက်စီးမှုကိုသာ ဆိုလိုပါသည်။ (ဥပမာအားဖြင့် စာအုပ်၏ စက္ကူအရည်အသွေးသည်royalshop.biz နှင့် မသက်ဆိုင်ဘဲ ထိုစာအုပ် စုတ်ပြဲနေခြင်း၊ တစ်စုံတစ်ရာ ပေကျံနေခြင်းကဲ့သို့သော ပျက်စီးချို့ယွင်းခြင်းတို့သည်သာroyalshop.biz နှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။)
အော်ဒါပါ ပစ္စည်းလက်ခံချိန်တွင် ပစ္စည်းပျက်စီးနေသော ကိစ္စမှလွဲ၍ မှာယူသူသည် အော်ဒါအတွက် ငွေပေးချေရန် တာဝန်ရှိပါမည်။ အကယ်၍ အော်ဒါပါပစ္စည်းလက်ခံချိန်တွင် အော်ဒါတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်စေ၊ အားလုံးကိုဖြစ်စေ ငွေပေးချေရန် ငြင်းဆန်ခဲ့ပါက ဝယ်ယူခွင့်ရ Website Member အဖြစ်မှ ပယ်ဖျက်ခြင်းခံရပါသည်။ ငွေပေးချေပြီးသော မည်သည့်အော်ဒါမဆို ငွေပြန်အမ်းမည် မဟုတ်ပါ။
Copyright © 2017 Royal Shop. Design & Developed by Royal Shop. All Rights Reserved.